Uncategorized | Truth and Peace | Page 2
April 1, 2009 at 1:37 am	(Uncategorized)
March 14, 2009 at 7:52 am	(Uncategorized)
March 12, 2009 at 1:07 pm	(Uncategorized)
January 7, 2009 at 2:40 am	(Uncategorized)
ဒသမသင်္ဂါယနာ။ ။ အင်းဝပြည်စဉ့်ကူမင်းသည်သသသနာနှစ်(၂၃၂၀)နှစ်၊သက္ကရာဇ်(၁၁၃၈) ခုနှစ်တွင်၊ ရှင်၇င်းမတိမာန်၊ရှင်နန္ဒမာလာတို့နဲ့သင်္ဂါယနာတင်သည်။
ဧကဒသမသဂ်ါယနာ။ ။ရတနာပုံမန္တလေးနေပြည်တော်မင်းတုံးမင်းမြတ်သည်၊သာသနာနှစ်(၂၄၁၅)နှစ် သက္ကရာဇ်(၁၂၃၃)ခုနှစ်၌၊ပရိယတ္တိဝိသာရဒသီလ၀ိသုဒ္ဓိဖြစ်တော်မူသောရာဇဂုရုတံဆိပ်တော်ရ၊ ဆရာတော်ကြီးများနှင့်ပိဋကတ်သုံးပုံ၌၊လိမ္မာတော်မူကြကုန်သော၊ရဟန်း(၂၀၀၀)တို့အပြင်၊အတွင်း ၀န်ခန်းပတ်မြို့စားကြီးမင်းကြီးမဟာဥဇနာ၊ယောမြို့စားမင်းကြီးမင်းလှမဟာစည်သူ၊သံတော်ဆင့်မိုင်းခိုင်းမြို့စားသီရိဇေယျသူ၊ သံတော်ဆင့်နေမျိုးရာဇစည်သူတို့ကိုကြပ်စေ၍(၅)နှစ်ကျော်မျှရေးသားထုလုပ်စေသော၊ ၀ိနည်း၅ကျမ်းပါဠ်ိတော်ကျောက်ချပ်ရေ(၁၀၀)အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းပါဠိတော်ကျောက်ချပ်ရေ (၂၀၈)ချပ်၊သုတ်သုံကျမ်းပါဠိတော်ကျောက်ချပ်ရေ(၄၁၀)တို့ကိုကုသိုလ်တော်၊လောကမာရဇိန်စေတီတော်ကြီးအတွင်း၊အုတ်ပြာဿတ်ဂူ၊(၇၂၈)လုံးတည်တော်မူ၍စုစုပေါင်းကျောက်ချပ်ရေ(၇၂၈)တွင်၊ ကျောက်စာပိဋကတ်တော်များကို၊သေလက္ခရသင်္ဂါယနာတင်သည်။
ဒါစလေဦးပုံညရဲ့သင်္ဂါယနာတင်စာရင်းပါ၊ပဉ္စမအကြိမ်ကနေ၊ဒသမအကြိမ်ထိသင်္ဂါယနာတင်စာရင်းဟု ဆရာတော်ကြီပညာရှင်ကြီးများအမှတ်မယူသော်လည်း၊ရှေးမြန်မာတို့သည်မိမိတို့၏စွမ်းအေားရှိသလောက် သာသနာတော်တည့်တန့်ရေး၊သန့်ရှင်းရေး၊ပြန့်ပွါးရေးကို၊ဦးလည်မသုံထမ်းရီကခဲ့ကြပါသည်ဆိုသောအထောက်ထား ကိုပြနိုင်ခဲ့ပါသည်ဟုဆိရပါမည်၊
January 5, 2009 at 4:24 am	(Uncategorized)
နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး ည တဲ့ တူမတော် Dream က Tag လာတော့ ဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့ စဉ်းစား တယ် နောက်ဆုံးဆိုတာ နိဂုံးချုပ်တာကို ပြောလို့ရပါတယ် ထပ်ပြီးမဖြစ်တော့တာပေါ့နော် တကယ်ကော ကျနော်တို့ ဘ၀တွေ ပြီးတော့ ညတွေ နိဂုံးချုပ်သွားပြီလား လို့ ကိုယ်ဟာကိုယ် မေးမိပြန်တယ် လက်ရှိဘ၀တွေ ချုပ်ပြီး နောင်ဘ၀အသစ်တွေစမဲ့ဟာက သေချာနေတော့ အဆုံးမဲ့တဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ အခုဘ၀လူ နောက်ဘ၀ခွေး နောက်လာမဲ့ ဘ၀တွေ ခန္ဓာတွေ..မဆုံသေး ဘူးဆိုတော့ နိဂုံးအတုပေါ့ဗျာ။
အခုလည်း နှစ်သစ်အစတဲ့ နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီပေါ့ဗျာ။ အတိတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့၊ကျနော်တို့ခြေလှမ်းတွေ က မကြာခင်မှာ တဖက်ကိုကူးတော့မယ်လေ။ နေံ့စဉ်မကြာခဏ စိတ်ထဲရွတ်နေဖြစ်တဲ့ သံဝေဂအလကာင်္ တစ်ပုဒ်ကို ပိုပြီးသတိရလာတယ် လေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်လာတယ်။
ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ကြီး ရဲ့ဒီသံဝေဂ လင်္ကာလေးကို ကျနော်မကြာခဏ ရွတ်ဆိုမိနေတယ်။
နောက်ဆုံးညတဲ့၊တိတိပပဆိုရရင်တော့် 2008 နှစ်ဟောင်းရဲ့နောက်ဆုံးည ကျနော်နှစ်သစ်ကို ငြိမ်း ချမ်းစွာထွေးပွေ့ချင်တယ်၊ထွက်လာမဲ့နေမင်းကိုမေတ္တာနဲ့နုတ်ဆက်ကြိုဆိုချင်တယ်အလားတူပဲအား လုံးကိုလည်း ရင်ထဲငြိမ်အေးစေချင်တယ် အဲ လိုငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြိုပျက်စပြုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ထေရ၀ါဒ အဆောက်အအုံကို ကျနော်တို့တက်ညီ လက်ညီ ပြန်ဆောက်ရမယ်။ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့ ကျနော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီး တရားဦဓမ္မစကြာင်္ကို ရွတ်ဆိုဆင်ခြင်မိတယ် နှစ်ဦးလေ..တရားဦးနဲ့ ပူဇော်ခဲ့တာပေါ့ နောက်တော့် သန္တိသုခနိုင်ငံတော်ရဲ့ ပထမခြေလှမ်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ သရဏဂုံကို လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ မဟာသရဏာဂုံ ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရင်း
ပြီးလို့ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့.. ဟော နေထွက်တော့မယ် လေ၊နှစ်သစ်တစ်ခုရဲ.နေ့သစ်က အရှေ့ ဆီမှာစနေပြီလေ။
January 3, 2009 at 7:38 am	(Uncategorized)
မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးမသာသနာတော်သည် အိန္ဒိယ၌ BC ၆ ရာစုမှစခဲ့ပြီး AD ၁၂ ရစု၌ကွယ်၏။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရမည်ဆိုလျှင် ပင်ရင်းဋ္ဌာန၌ သာသနာတော်ဟူသော မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ သည် နှစ်ပေါင်း(၁၈၀၀)မျှသာ တည်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၀ါဒအန္တရယ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တရယ်တို့ကြောင့် မူလနေရာ၌ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါ၏။
ဗြာသ္မဏ၀ါဒနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်း မူလထေရ၀ါဒသည် မဟာယနသို့ ကူးခဲ့ရ၏။ နောက်ဆုံး မူလပင်မ နယ်မြေ ဖြစ်သောအိန္ဒယမှ လွင့်ထွက်ခဲ့ရသည်ကို ကျနော်တုိ့တွေ့ရ၏၊ ဖတ်ရ၏၊ ထို့အတူ ကြားနာခဲ့ရပါ၏။ ကျနော်တို့သည်လည်း စစ်မှန်သော မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကိုရခဲ့ပါ၏။ ရခဲ့သည်ဟုဆိုရာ၌
ဒဿနလည်းပါ၏၊ ကျင့်စဉ်လည်းပါ၏။ ၀ိဇ္ဇာ(အသိ) စရဏ(အသိနဲ့ထပ်တူညီသောအကျင့်) ကို လည်းရခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ကံတရားကြောင့် ကျနော်တို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကို ရခဲ့ပါသည်ဟုဆိုလျှင် သာသနာတော်အား ကျနော်တို့ဆီအရောက် သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြကုန်သော မထေရ်မြတ်တို့နှင့် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့၏ ကျေးဇူးတရားကို မေ့နေခြင်းသာဖြစ်ပါ၏။ လောက၌ ကျေးဇူးကင်းသူဟူ၍မရှိ သူ့ကျေးဇူးကိုသိပြီး ဆပ်ရမည်သာ။
ထိုကျေးဇူးရှင်တို့၏ စွမ်းဆောင်မှုတို့ကြောင့် ရရှိလာသော ကျနော်တို့၏ ရေမြေပေါ်၌ ထေရ၀ါဒသည် အမှန်တကယ်ခိုင်ခန့်စွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးဟုဆိုလျှင် ကျနော်တို့သည် အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းသော တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါမည်။
စင်စစ် မြန်မာပြည့်သို့ ထေရ၀ါဒရောက်ရှိနေသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီး ကိုးတိုင်းကိုးဋ္ဌာန သာသနာပြုလွှတ်စဉ်ကပင် ဖြစ်၏။ အထောက်အထာမခိုင်သော အဖြစ်များရှိနေစေ ကာမူ ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက မြန်မာပြည်သို့သာသနာရောက်ခဲ့ကြောင်း ဘုရားသမိုင်းမျာကဆို၏။
ထိုမျှ နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီ်ဖြစ်သော ကျနော်တို့အမိမြေပေါ်ရှိ ထေရ၀ါဒသည် မပြိုနိုင်သောအင်းအားဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ပါပြီလော?
ထိုမေးခွန်းကို ဖြေရန်အတွက် ကျနော်တို့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို ပြန်လည်တူးဖေါ် ရပါလိမ့်မည်။
အမှန်အားဖြင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟူသည် သစ္စာဝါဒသာဖြစ်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓကို တနည်းအားဖြင့် “သိသူ” ဟုဆိုကြ၏။ ဘာကိုသိသနည်းဟုမေးသော် သစ္စာတရားကို သိသူဖြစ်ပါ၏။ လောက၌ သိစိတ်ရှိသော သတ္တ၀ါတိုင်း သည် သိစရာအာရုံကို သိကြသည်သာဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် သိပုံခြင်းကားမတူချေ။ သိသည်ဟူဆိုရာ၌ လည်း ကွဲသေး၏။ မိမိညဏ်အဆင့်ကို မှီ၍ အသိကွဲကြသည်မှာ လောကနိယာမဖြစ်သည်သာ။
သုတမယညဏ်ဖြင့်လည်း သိ၏။ စိန္တာမယညဏ်ဖြင့်လည်း သိ၏။ ဘ၀နာမယညဏ်ဖြင့်လည်း သိ၏။
ထိုကြောင့် ကျနော်တို့၊ အန္ဓပုထုဇဉ်တို့၏ အမြင်အရ လူတွင် ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ ကုလားတရုတ် ရှိ၏။
ကလျာဏပုထုဇဉ်တွင် လူကို လူလိုမြင်၏ အရိယာအဆင့်တွင်မူ ရုပ်နာမ်ဓမ္မ သင်္ခါရအဖြစ် မြင် သည့်တိုင် အဆင့်ဆင့်သွား၏။ မြတ်စွာဘုရားအတွက်မူကား ကိလေသာကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်၍ လောကတစ်ခုလုံးကို သုညတ အဖြစ်သာမြင်တော့၏။
သို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမဓမ္မသည် ဘက်လိုက်မှုအကင်းဆုံးဖြစ်ပါ၏။
ကိလေသာတန်းလန်းနဲ့ ပြုစုထားသော အယူအတွေးများတွင် အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ဘက်လိုက်မှု ပါသည်ကို ကျနော်တို့ တွေ့ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။
ဟု လူတိုင်း အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို လေ့လာဘူးသူတိုင်း သိနေပြီးဖြစ်ပါ၏။ သို့အတွက် ထေရ၀ါဒကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ရာတွင် အဆိုပါတရားကို လက်ကိုင်ပြုရမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထေရ၀ါဒ၏ ပန်းတိုင်သည် သန္တိသုခဖြစ်၏။ ပန်းတိုင်သို့သွားရာတွင် ကျနော်တို့သည် ကိလေသာ မစင်သေးသည့် အားလျှော်စွာ မကောင်းမှု၊ ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လည်း ကျနော်တို့သည် မိမိ၏အတ္တအား ရှေ့တန်းမတင်မိစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါ၏။
မကောင်းမှုကို မလွဲသာ၍ ပြုလုပ်ရသည့်တိုင်အောင် လောက၌ ဓမ္မထွန်းကားရေး အတွက်သာ ဖြစ်သင့်ပါ၏။
အမှန်စင်စစ် ထေရ၀ါဒကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမည်ဟု ဆိုပါလျှင် မိမိကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို ဖြူသည် ထက် ဖြူအောင် သီလဖြင့် ဆေးကြောရပါမည်။ မိမိစိတ်ကိုလည်း ဖြူသထက်ဖြူအောင် သမာဓိဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘာဝနာဖြင့်လည်းကောင်း အထပ်ထပ် ဆေးကြောသန့်စင်စေရပါမည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါက ကျနော်တို့၏ထေရ၀ါဒသည်လည်း ကျနော် တို့မြေပေါ်မှ လွင့်ပါးလိမ့်မည်။
ဤနေရာ၌ အလွန်မှတ်သားဖွယ် သံဝေဂရဖွယ် ကျနော်တို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမည့် စကားတချို့ကို ထပ်၍ တစ်ခါပြန်ပြောရပါလျှင်….
“ထေရ၀ါဒ အုတ်မြစ်ဟူသည် ကျောက်သားများ၊ သံများ အင်္ဂတေများမဟုတ်။
အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းဟူသမျှတို့သည် တစ်ချိန်က မည်မျှပင်လက်ရာမြောက်စေကာမူ
နေက်ဆုံးတွင်မူ ဘာသာရေးအတွက် တန်ဖိုးမရှိလှတော့ဘဲ ရှေးဟောင်းသုတေသန အတွက်သာ
ထိုကြောင့် “ထေရ၀ါဒအုတ်မြစ်ဟူသည် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာသာဖြစ်၏”
December 31, 2008 at 1:05 pm	(Uncategorized)
December 30, 2008 at 5:14 am	(Uncategorized)
တခါတုန်းကများ တရားဆွေးနွေးနေကြတဲ့ လူကြီးတွေဝိုင်းနာသွားပြီး နားထောင်ကြည့်တာ ကြားရတာနဲ့တင် ကျနော် လှည့်ပြန်လာခဲ့ရတာလေ၊ စဉ်းစားကြည့်လေ… ပြောနေကြတာက ကျမ်းအကိုး အကား အပြည့်နဲ့ဆိုတော့လည်း ကျနော်မ၀င်ရဲပေါင်ဗျာ။
နော်ထပ်ဆက်ပြီး စစ်ရဦးမှာလားဗျာ နောက်ထပ်ဆက်ပြီစစ်ရရင်တော့ …